ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ်သားငယ်များကိုသံလိုက်ဖြစ်လာမှသိကောင်းစရာများ
သင်သည်သင်၏အိပ်မက်ထိုမိန်းမကိုအကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်ကြပါ? ဒါကြောင့်အများစုယောက်ျားတွေစမ်းသပ်မှုများနှင့်အမှားအယွင်းများနှင့်ပြည့်စုံအချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါသည်နေစဉ်, သင်ကယင်းသံလိုက်ဖြစ်လာနှင့်သင့်အနာဂတ်ဇနီးရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အကြံပြုချက်တစ်ခုစာရင်းပြုစုထားသောပါပြီ.
အဖျား #1: ငြင်းပယ်ခံရအမြဲတမ်းစစ်မှန်တဲ့ငြင်းပယ်ခံရမဟုတ်ပါဘူး
သင်သည်အဆင်းလှသောမိန်းမခရီးဦးကြိုပြုခြင်းသည်ဆိုပါစို့, စကားပြောတက်ဒဏ်ခတ်ပြီးနောက်သင်သူမရည်းစားရှိတယ်ထွက်ရှာပါ. အများဆုံးယောက်ျားတွေလှည့်အားနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ထိုငွေကို ယူ. ချန်ထားမည်နေစဉ်, သင်အမှန်တကယ်မဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်. ဒီကငြင်းပယ်ခံရတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာကိုမမျှမကသူမစိတ်ဝင်စားမကြောင်းတစ်ညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်. စကားပြောခန်းကိုသည်ပြုံးရယ်ခြင်းနှင့်အပြုံးများနှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့နဲ့စီးမယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့အရိပ်လက္ခဏာအဖြစ်သူတို့အားယူ. အမှန်တကယ်အမျိုးသမီးကိုဆွဲဆောင်၏အနုပညာကျွမ်းကျင်တတ်ခဲ့သူတစ်ဦးကလူကိုစစ်မှန်ကြောင်းနှင့်သူသည်မိမိကိုမြင်သောအခါကောင်းတစ်ဦးအမျိုးသမီးတွေသိတယ်. သူမကလောလောဆယ်မရနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကအခွင့်အလမ်းရှိသည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပေ. ဒီမိန်းမအဘို့မရှိရရန်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါသည်. အကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အချို့ချစ်ကြည်ရေးမှတဆင့်စတင်.
အဖျား #2: ထင်ရှားသည်
လူအစုအဝေးထဲကထွက်သွားရပ်နေသည်ကိုချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်အလွန်အရေးပါသည်. အများအပြားယောက်ျားတွေတူညီသောအရာဟူမူကား, သင်ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းပရောပရည်ရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်သင်မည်သို့ထွက်မတ်တပ်ရပ်ကြပါ? စိတ်ချယုံကြည်အဖြစ်ဖြတ်ပြီးလာကြ, cocky မ. စစ်မှန်သောဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းသင်တို့ကိုနှစ်ဦးစလုံးဝေစုအကျိုးစီးပွားနှင့်ဝါသနာကိုရှာဖွေရန်. ထိုအနောက်ဆုံးအနေနဲ့, သီးခြားစွာကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်. ထိုသို့ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်လျှင်, သင်သည်လက်ျာသည်မိန်းမဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ခြင်း.
အဖျား #3: တစ် Connection ကိုလုပ်ပါ
သူမ၏အမြင်များနဲ့ options အပေါင်းနှင့်အတူသဘောတူညီနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ခံတွင်းထဲကထုတ်လာတဲ့အရာခပ်သိမ်းဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာအမျိုးသမီးတစ်ဦးအပေါ်အနိုင်ရမှလမ်းမက. အမျိုးသမီးများလို့သူမကပြောပါတယ်အရာအားလုံးနှင့်အတူသဘောတူသောသူတစ်ဦးသည်လူအဘို့အရှာနေဘယ်တော့မှနေကြတယ်. ကျနော်တို့ကစိန်ခေါ်မှုကြိုက်. ကွဲပြားခြားနားတဲ့ရှုထောင့်နည်းလမ်းများအားဆွေးနွေး, ထင်မြင်ယူဆချက်, အကျိုးစီးပွား, နှင့်လောကဓံတရား၌ကျင်လည်နေတဲ့နက်ရ​​ှိုင်းတဲ့ connection ကိုဖွဲ့စည်းရန်အထောက်အကူပြုသည်. အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ယောက်ျားနှင့်တစ်ဦးရိုးသား connection ကိုရှာဖွေနေသည်.
အဖျား #4: ခွန်အား
အမျိုးသမီးများခိုင်မာသည်နှင့်နှစ်မျိုးလုံးစိတ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမြင့်မားရ​​ာထူးရရှိထားသူသူတစ်ဦးအိမ်ထောင်ဖက်ကြိုးပမ်း. သူတို့ပိုက်ဆံမရှိကြပါကြောင့်သူတို့သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုဆွဲဆောင်မသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကဲ့သို့အချို့ယောက်ျားတွေခံစားနေချိန်တွင်, အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်, သို့မဟုတ်မြင့်မားသောလူမှုအဆင့်အတန်း, မှန်ပါတယ်မဖြစ်. အမျိုးသမီးများပိုမိုအားကောင်းဇာတ်ကောင်နှင့်သူသည်ထိုစေချင်တာတွေကိုသိတယ်နှင့်ယောက်ျားမှဆွဲဆောင်နေကြတယ်. သို့သော်ဤခွန်အား misconstrue မ. စစ်မှန်တဲ့ခွန်အားရရှိထားသူသူတစ်ဦးသည်သူ၏အထိခိုက်မခံနဲ့ရင်ခုန်စရာဘက်ခြမ်းကိုပြခြင်းငှါမကြောက်ကြသည်.
အဖျား #5: ထိုသဘောတူညီမှုရပိတ်ပြီး
သူတို့သဘောတူညီချက်ပိတ်ဖို့ကိုဘယ်လိုသိမအဖြစ်အများစုမှာအမျိုးသားများကမိတ်ဆွေဇုန်သို့ကျရောက်. သဘောတူညီချက်တွင်ပိတ်ထားသောမပါဘဲ, သင်မကြာမီဂရုစိုက်တတ်တဲ့နှင့်မေတ္တာကောင်လေးမိတ်ဆွေအဖြစ်လူသိများလိမ့်မည်, နှင့်ကံမကောင်းတာကဒီ status ကိုဖယ်ရှားပစ်ရရန်ခဲယဉ်းလိမ့်မည်. ယောက်ျားတွေသူတို့ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိကြဘူးရိုးရိုးလေးကြောင့်ဘက်ခြေရာခံများနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူတပါးပိုင်စေခြင်းငှါပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်ရနိုင်. အဓိကသော့ချက်နိမိတ်လက္ခဏာများအမျိုးသမီးအတွက် zeroing နှင့်အတူနည်းနည်းပြင်းထန်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသင်သဘောတူညီချက်ပိတ်ဖို့ရန်အထောက်အကူပြုမည်ပို့ပေး.